बगनासकालीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिले मासिक भत्ता पाउने – Palpa Samachar
बगनासकालीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिले मासिक भत्ता पाउने
By Samacharpalpa	 On Jun 2, 2022
पाल्पा । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछिको बगनासकाली गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले बिभिन्न लोककल्याणकारी कार्यक्रमको निर्णय तथा घोषणा गरेको छ । कार्यपालिकाको बैठकले बगनासकाली गाउँपालिका भित्रका अपांगता भएका ब्यक्तिहरु अन्र्तगत पहेलो कार्ड भएकाहरुलाई मासिक ५०० र र सेतो कार्ड भएकाहरुलाई मासिक ३०० रुपैयाँका दरले अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । रातो र निलो कार्ड भएकाहरुले यसअघिबाटै भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै गाउँपालिका अन्र्तगत रहेका लिफ्टीङ खानेपानी योजनामा ६० प्रतिशत बिद्युत शुल्क पालिकाले बेहोर्ने निर्णय समेत भएको छ । त्यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई मासिक १ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले बताउनुभयो । यो निर्णय यही साउन १ गदेखि लागू हुने अध्यक्ष चिदीले बताउनुभयो । बैठकले हिंसापिडीत महिलाहरूका लागि लक्षित गरि परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको प्रवक्ताको रुपमा वडा नं. ३ का अध्यक्ष टिका बहादुर थापालाई चयन गरेको छ । बैठकले बिभिन्न बिषयगत समितिहरु समेत गठन गरेको छ । न्यायीक समिति संयोजकमा पालिका उपाध्यक्ष हरि प्रसाद पाठक, अनुगमन समिति संयोजकमा उपाध्यक्ष हरि प्रसाद पाठक र सदस्यहरुमा टीका थापा र गीता रेग्मी रहनुभएको छ । जल श्रोत तथा, श्रोत्त अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति संयोजकमा पालिका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदी रहनुभएको छ । राजस्व परामर्श तथा बजेट कार्यक्रम तर्जुमा समिति, संयोजकमा उपाध्यक्ष हरि प्रसाद पाठक चयन हुनुभएको छ ।
लेखा समितिको संयोजकमा वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष ठानेश्वर तिमिल्सिना चयन हुनुभएको छ । जसको सदस्यमा प्रकाश न्यौपाने र जमुना क्षेत्री रहनुभएको छ । सामाजिक विकास समितिको संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य गीता रेग्मी, विधेयक समिति संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य उमा अर्याल न्यौपाने, आर्थिक समितिको संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य खुमादेवी भट्टराई , सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य वसन्ती थापा , वातावरण तथा विपत समिति संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य बोमलाल सुनार र पुर्वाधार विकास समिति संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य तेज प्रसाद रसाली रहनुभएको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सवलीकरण तथा अध्ययन गर्नको लागि उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पाठकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिले असार १५ भित्र बैंकहरुसँग सरसल्लाह गरि प्रतिबेदन पेश गर्ने बताइएको छ । बैठक प्रशासकीय प्रमुख विष्णु बहादुर घर्तीको संचालन तथा पालिका अध्यक्ष सरस्वती चिदीको अध्यक्षतामा चलेको थियो ।
पाल्पा अर्गलीका जनप्रतिनिधिको दुई महिनाको सेवा सुविधा राहत कोषमा
रम्भा कांग्रेसका सभापति अशोक फाल एमालेमा प्रवेश